Khariidadaha Google waxay hagaajineysaa hawlgalkeeda - Geofumadas
Khariidadaha Google waxay hagaajinayaan hawlgalka
Febraayo, 2010 Google Earth / Maps, tabo cusub, dalwaddii Earth
Google waxay soo saartay nooc beta cusub oo ah biraawsarka biraawsarkiisa, qalab aad u xiiso badan. Xaaladdan oo kale, si aad u hawlgeliso waa inaad fulisaa xiriiriyaha cusub! dhinaca midig ee calaamadda baaritaanka shaybaarka, oo dhaqaajiso xulashooyinka.
Digniintu way cadahay, kaliya waa tijaabooyin la qaadayo, marka marka ugu danbeyn loo sii daayo dadweynaha waxay noqon kartaa in dhammaantood aan lagu darin. Sidoo kale haddii ay xasillooni noqoto waa inaad dib ugu noqotaa cinwaanka:
Aan aragno in saaxiibada la soo celiyo.
Inta badan wax ku ool ah, hadda weynaanta waxaa lagu sameyn karaa dariishada dhajiska, iyo sidoo kale barnaamij kasta oo CAD / GIS ah. Si tan loo sameeyo, badhan ayaa ka muuqda hoosta bar zoomka.
Soojiidashada kale waa nooc ka mid ah aragtida isometric, oo loo yaqaan wareegga. Wax fikrad ah kama haysto sida ay u sameeyeen, laakiin isagu aad buu u dhagxiyey. Tusaalaha kor ku xusan waa Xarunta Shirarka ee ESRI ku qabato dhacdooyinkeeda sanadlaha ah, ee Embarcadero Avenue ee San Diego. U fiirso inay yihiin darbooyin saacado kala duwan ah, waxay ku tusaysaa hooska labada munaaradood, oo ka duwan kan dhismaha qalooca.
Laakiin waxyaabahan yaryari kama qaadayaan dhadhanka, ikhtiyaarka ah in laga beddelo afarta xagal iyo dhaweyntu waxay siisaa adeeg wanaagsan. Waxay leedahay xoogaa la mid ah indhaha shimbir de dalwaddii Earth, laakiin ma aha isku mid, tan waxay u egtahay muuqaal aragti ah iyo kan muuqaalkeedu ka badan yahay, waxay u muuqataa mid soo jiidasho leh, inkastoo aysan jirin meelo badan.
Doorashadan si ay u noqoto mid furfurnaan ah, sidoo kale waa qorshe, inuu awood u yeesho in uu ka soo baxo xaglaha 90, adigoo had iyo jeer ku haya magacyada marxaladdiisa.
Waxay sidoo kale ku darsadeen shaqooyinka badhanka saxda ah, kaas oo aad ku dhejin kartid lat / dheer, ama bedelka "halkan ku yaal", taas oo bandhigaysa cinwaanka iyo ganacsiga barta la doortay.
Hawlaha kale waa in la imtixaanaa, sida wareegga caqliga, kaas oo ka digaya marka xayiraad lagu sameeyo wax aan jirin.
Waxaan kaaga tagayaa inaad isku daydo.
Post Previous" Hore Gabadha la socota shukulaatada
Post Next Geoinformatics 1: Qalabka fogNext »